Iskuduwaha Isgaarsiinta - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > Isuduwaha Isgaarsiinta
Goobta: Isku-dhafka - Isku-duwaha Isgaadhsiinta wuxuu awoodi doonaa inuu ka shaqeeyo guriga laakiin waxaa looga baahan doonaa inuu taageero dhacdooyinka shakhsi ahaaneed.
Iskuduwaha Isgaadhsiinta ayaa la shaqayn doona Maareeyaha Isgaadhsiinta si uu u wanaajiyo oo u taageero ololaha, isbeddelka sheeko, abaabulka, iyo xiriirka warbaahinta ee dhinaca isgaarsiinta.
Warbixino ku socda: Maareeyaha Isgaarsiinta
Soo koobida Ururka:
Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado (CIRC) waa isbahaysi ku salaysan gobolka oo dhan oo ka kooban soogalootiga, shaqada, diimaha, dhalinyarada, iyo ururada xulafada la aasaasay 2002 si loo dhiso cod midaysan gobolka oo dhan si loo hagaajiyo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga Colorado iyo Maraykanka . CIRC waa urur 501(c)(3) oo hoos imanaya Xeerka Dakhliga Gudaha waxayna ku gaadhay hadafkeeda ka qaybgalka madaniga ah ee aan dhinac ka ahayn, waxbarashada dad waynaha, iyo u doodista si ay ugu guulaysato siyaasadaha guud ee cadaalad, bini'aadantinimo iyo shaqayn kara.
Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado waxay raadinayaan Iskuduwaha Isgaarsiinta si uu u bilaabo guga 2022. Iskuduwaha Isgaarsiinta wuxuu u warbixin doonaa Maareeyaha Isgaarsiinta wuxuuna si dhow ula shaqeyn doonaa waaxyaha kale ee CIRC.
Doorarka Gaarka ah iyo Waajibaadyada:
Abaabulaha iyo Taageerada Xubinta
● La shaqee Abaabulka, Ololaha, Adeegyada Sharciga, Horumarinta, iyo Waaxaha Khadka Taleefanka si loo waafajiyo isgaarsiinta wax ku ool ah, qasabka ah ee abaabulka iyo aruurinta baahiyaha.
● Samee agab wacyigelin/waxbarasho/ u doodid si loola xiriiro ololaha, lamaanaha iyo macluumaadka isbaheysiga xubnaha, taageerayaasha iyo deeq bixiyayaasha.
● U diyaari xog cusub oo ku saabsan xubinnimada.
● Taageer ololaha sharci-dejinta, kiisaska iska caabinta masaafurinta iyo dadaallada kale ee abaabulka iyadoo la diyaarinayo luqadda, abuurista codsiyo, ku dhiirrigelinta ololaha emailka iyo warbaahinta bulshada, iwm.
Qabyo-qoraalka iyo Ku-dhejinta Warbaahinta
● La kaasho kooxda horumarinta si loo fududeeyo ururinta iyo isticmaalka sheekooyinka dadka ay saamaysay shaqada CIRC (xaaladaha warbaahinta iyo lacag ururinta) si anshax leh, awood siinaysa
● Maaree jawaabta degdega ah ee warbaahinta, oo ay ku jiraan qorista war-saxaafadeedyada, meelaha laga hadlo, iyo fariimaha warbaahinta iyo iskudubarid waraysiyada warbaahinta marka loo baahdo.
● In uu gacan ka geysto qorsheynta, saadka, iyo u diyaarinta xubnaha kale ee CIRC shirarka jaraa'id.
Webka / Warbaahinta Bulshada / IT
● Isku-dubarid waxa ku jira bogga internetka, e-qarxyada iyo ololaha macluumaadka. Maamul CIRC keeda bulsho
joogitaanka warbaahinta, oo ay ku jiraan Twitter, Facebook, iyo Instagram
● Ka faa'iidayso xirfadaha naqshadaynta xooggan si aan u abuurno waraaqo, garaafyo, sawirro, muuqaalo, iwm si aan u taageerno kaabayaasha isgaarsiinta
● U soo bandhig taageero dhacdo kala duwan, oo ay ku jiraan sawir qaadis, baahinta tooska ah, iwm ee munaasabadaha ololaha, shir-sannadeedka CIRC, socod iyo ficilo, iyo dhacdooyin kale
Ballanqaadka kahortagga cadaadiska
Dhammaan shaqaalaha waxa laga filayaa in ay ka qaybqaataan firfircooni ku yeeshaan CIRC-da gudaha ee dulmi-diidka iyo ka mid noqoshada
dadaalka loogu jiro in laga shaqeeyo dhinaca dhaqanka urureed ka tarjumaysa qiyamka iyo mabaadi'da in aan
waxay u dagaalamayaan aduunka.
Aqoonta, Xirfadaha iyo Awoodaha Loo Baahan Yahay
Naqshadaynta dhijitaalka ah ee xooggan iyo xirfadaha sawir qaadista iyo soo bandhigay waayo-aragnimada naqshadaynta ee hore
Xirfad lagu muujin karo qoraa ahaan.
Aqoonta qaabka AP, waayo-aragnimadii hore ee isgaarsiinta warbaahinta, gaar ahaan qorista war-saxaafadeedyada, la-talinta warbaahinta, iyo qodobbada hadalka ayaa dheeraad ah.
Firfircoon, si heer sare ah loo abaabulay, oo si taxaddar leh u fiirsada
Xirfadaha dadka dhexdooda ah
Xirfado adag oo xalinta mashaakilaadka iyo kartida aad ushaqayso si madax banaan iyo cadaadis
Xirfadaha farsamada adag. Khibrad hore ee wordpress, canva, ama shabakad waxqabad oo lagu daray.
Ballanqaad xoog leh oo ku aaddan caddaaladda bulshada iyo ka hortagga cabudhinta
Aqoonta luqadda labaad iyo dheeri
Waxbarashada iyo Experience
Diblooma dugsiga sare ama u dhigma
Khibrad isgaarsiin hore
Si aad u codsato, fadlan ku soo dir email jobs@coloradoimmigrant.org oo wata resume, warqad dabool ah, 1 muunad qoraal ah (Ingiriisi), iyo faylal naqshad gaaban. Haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid, fadlan u soo dir Bianey Bianey@coloradoimmigrant.org
Magdhawga, Faa'iidooyinka & Shuruudaha Shaqada
Kani waa boos buuxa, joogto ah, midaysan oo la magdhabay $47,430 sanadkii. Iskuduwaha Isgaadhsiinta ayaa u warbixin doona Maareeyaha Isgaadhsiinta. Isku-duwaha Isgaadhsiinta wuxuu yeelan doonaa muddo saddex bilood ah oo tijaabo ah.
a) Taleefanka gacanta - CIRC waxay bixin doontaa $75 bishiiba gunno si ay ugu taageerto isticmaalkaaga taleefanka gacanta, si loogu daro jeegaga mushaharka.
b) Caymiska Caafimaadka - Iskuduwaha Isgaarsiinta iyo sidoo kale laba ku tiirsaneyaal da'doodu ka yar tahay 18 jir waxay xaq u leeyihiin inay helaan 100% caymiska caafimaadka, aragga, iyo daryeelka ilkaha ee loo-shaqeeyaha kafilo laga bilaabo maalinta koowaad ee shaqada.
c) Siyaasadda deeqsinimada leh ee PTO: Dhammaan shaqaalaha CIRC ee wakhtiga buuxa waxay ku bilowdaan laba toddobaad oo fasax ah oo fasax ah tani waxay kordhisaa sannadkii.
d) Kobcinta Xirfadlaha: $1,000 oo ah maaliyadda horumarinta xirfadda sannadkii.
e) Kharashka Nolosha ee Sannadlaha ah ee hagaajinta: Booskani waxa uu heli doonaa $1,000 mushaharka kharashka nolosha ee korodhka, marka lagu daro isbeddelada kale ee qandaraaska ururka.
f) Waxa laguu soo celin doonaa kharashaadka inta lagu jiro hawshaada caadiga ah ee heerarkan soo socda:
i) Masaafada - 65 senti maylkiiba.
ii) Cuntada, hoyga, saadka, ama kharashaadka kala duwan waa la soo celin doonaa iyadoo lagu salaynayo oggolaanshaha foomamka iyo rasiidhada la soo gudbiyay.
"Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado waxaa ka go'an in si buuxda loogu daro dhammaan shakhsiyaadka u qalma. Iyadoo qayb ka ah ballan-qaadkan, waxaan hubin doonnaa in dadka naafada ah la siiyo hoy macquul ah. Haddii hoy macquul ah loo baahdo si looga qayb qaato codsiga shaqada ama habka waraysiga, fadlan la xidhiidh paola@coloradoimmigrant.org. CIRC waa shaqo-bixiye loo siman yahay mana takooro ku salaysan isir, jinsi, diin, asal qaran, aqoonsiga lab ama dhedig, nooca galmada, naafanimada, da'da, ama nooc kasta oo kale oo ay ilaaliyaan sharciyada maxalliga ah, gobolka, ama federaalka. Waxaa naga go'an inaan dhisno koox shaqaale oo kala duwan, sinnaan leh, oo loo dhan yahay. Waxaan si adag u dhiirigelinaynaa codsadayaasha ah dadka midabka leh, LGBTQ, haweenka, trans, iyo jinsiga dadka aan waafaqsanayn jinsiga, dadka naafada ah; iyo/ama dad hore u xidhnaa."